PressReader - Ilanga: 2017-10-09 - UTHOLWE ENGAMATHAMBO OZILENGISE EHLATHINI
UTHOLWE ENGAMATHAMBO OZILENGISE EHLATHINI
Ilanga - 2017-10-09 - Front Page - THANDEKA NGOBESE
ZIYATHUTHUMELA wukwethuka izingane zabafana zaseNtuzuma ebezihamba emahlathini ziyozingela izinyoni zazithela phezu kwamathambo omuntu elenga esihlahleni.
Lezi zingane ezintathu okuthiwa zithole la mathambo ezineminyaka engaphansi kweyisi-7 ubudala kuthiwa ziphindele emuva ngejubane zahlaba umkhosi.
Ngokusho kwelunga leCommunity Policing Forum (CPF) uNkk Ntombinkulu Chonco (56), bethuke boma nabo uma sebefika endaweni yesi- gameko sebebona amathambo omuntu okukhombisa ukuthi kade ashona njengoba abesehhohlokile.
“Lo muntu ubegqoke isikibha esinemigqa emhlophe nonyama nebhulukwe eliluhlaza lezimpahla zokusebenza elidume ngosiyasebenza nezicathula ezinsundu.
"Siyasola ukuthi wazilengisa ngentambo nangesikibha ngoba ikhanda namathambo omgogodla kusalenga entanjeni kodwa isingenzansi sesihhohlokela phansi ngenxa yokonakala.
"Kuyacaca ukuthi lesi sigameko kade senzeka njengoba nezingubo abezigqokile zingasabonakali kahle wukuguga. Iphunga kalisekho njengoba inyama ingasekho sekusele amathambo wodwa,” kusho uNkk Chonco.
Uthi lo muntu kababoni ukuthi ngowasendaweni ngoba ngabe bezwa ukuthi kukhona odukile. Amaphoyisa angagunyaziwe ukukhuluma nabezindaba, athi asola ukuthi lo muntu wazilengisa eminyakeni emithathu noma emine eyedlule. Bathi la mathambo azohlolwa ulibofuzo.
Okhulumela amaphoyisa KwaZuluNatal, uCapt Nqobile Gwala usiqinisekisile lesi sigameko wathi amaphoyisa aphenya ngokutholakala kwala mathambo.
ATHOLAKALE elenga esihlahleni amathambo omuntu okubukeka sengathi ngowesilisa ngenxa yezimpahla eziseduze kwala mathambo. Kusolwa ukuthi wazibulala ngokuzilengisa ehlathini eliseNtuzuma okunzima ukubona ukuthi ngamathambo kabani lawa.